Nei vanhu vachisarudza Semalt
Vamwe varidzi vewebsite vanofunga kuti nerubatsiro rwemavara akasiyana, masosi avo angasvika padanho repamusoro muinjini yekutsvaga. Vanofunga mazwi akakosha achawedzera mawebhusaiti, uye saka kuzorora kukuru kwaswedera. Kunyengedzera kusinganzwisisike. Dai zvaive zvakadai, paisazove nekudikanwa kwevanoruzivo SEO nyanzvi uye dzine simba SEO optimization nzvimbo. Izvo zvinowedzera kuomesa, uye pasina nyanzvi, bhizinesi rako repamhepo richakuunzira chete kusuwa. Pasinei nezvose, Semalt inoenderera mberi SEO-optimization yewebsite kweanopfuura makore gumi.
Kuziva kukuru kunoritendera kuti rienderane nebasa rekuwedzera kuoma. Semalt akachengetedza mazana enzvimbo, ndokuzvidhonza kunze kwegomba. Nhamba dzevatengi dzakawanda dzinoongorora izvi. Kunze kwezvo, iwe unogona kutarisa izvo zviitiko zviri pawebhusaiti yedu, izvo zvinopa mienzaniso yezvokwadi yemashandisi edu nzira. Kana iwe wafunga kuvaka bhizinesi rakakomba, yako nzira ndeiyi Semalt. Isu chete tinogona kubatsira vanhu kuti vaite chaiyo investa. Kubudirira kwako kunoreva kubudirira kwedu, saka tinoziva nzira yekubudirira.
Haisi chakavanzika kuti Semalt ave mutungamiri mune webhusaiti SEO optimization. Iyo ine timu ine simba yevashandi chaivo vanogona kubata chero basa. Chekutanga pane zvese, iro boka renyika-kirasi SEO nyanzvi. Isu tinofanirwa kubhadhara mutero kune maneja anokwanisa, IT-nyanzvi, vatengesi. Iwo mafuta ehurongwa hwedu hweSimalt ane simba zvikuru anounzwa nevanezvinopa vanyori, vanyori vekugadzira uye vanoongorora. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti yega yehunyanzvi uyu ane hukuru hwe SEO ruzivo.
Mune mamwe mazwi, Semalt inogona kuiswa senzira inoshongedzerwa zvakanaka yekugadzirisa mawebhusayithi kuburikidza nekucheka-kumucheto SEO matekinoroji. Iye zvino zvinova pachena kuti sei Semalt asina makwikwi akakodzera munzvimbo ino. Muchokwadi, Semalt nzvimbo inotungamira yakasimbiswa kwemakore. Nhasi, anenge munhu wese anoziva kuti chete Semalt inovimbisa kubudirira kwechokwadi mune SEO optimization.
Zvatinoziva Nezve SEO
SEO kana Yekutsva Injini yekushandisa inowanzoshandiswa mune lexicon pakati pevanoshandisa internet. Sezvakazoitika, haasi munhu wese anonzwisisa izvo zvechokwadi zvinoreva zita racho. Uyezve, vanhu vashoma ndivo vanonzwisisa kududzirwa kwazvo. Tiri kuzovhura keteni uye tsanangura kuti chii. Sezvo iwe uchinyatsoziva, injini dzekutsvaga dzinopa vashandisi zvinyorwa zvemasaiti mukupindura kwezvavanenge vakumbira. Dzimwe nzvimbo dzinobuda pamusoro muinjini yekutsvaga, nepo dzimwe dzinogona kuwanikwa nekumhanya nemapeji mashoma. Kutsvaga optimization ye webhusaiti kunoitirwa kuti webhusaiti yako iende kunzvimbo yepamusoro muye yekutsvaisa injini. Nekudaro, zvakachengeteka kutaura kuti SEO ndiyo seti yematanho ekuvandudza iyo webhusaiti nzvimbo mune yekutsvaga injini mhinduro, maererano nesarudzo dzakasarudzika.
Kana, munguva ichangopfuura iyi, iyo internet yaishandiswa zvakanyanya kutsvaga ruzivo, nhasi mamiriro acho akasiyana. Huwandu hunogara hunowanda hwevashandisi veindaneti, hunyanzvi hutsva, uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvakachinja Internet kuita zvese zviri zviviri zvekushambadzira chishandiso nenzvimbo yekutengesa. Kusimudzirwa kwepamhepo kunogona kubatsira kune chero kambani ine vateereri vangangotsvaga zvigadzirwa kana masevhisi paInternet. Nekudaro, zviuru zvevanhu zvinotsvaga zvigadzirwa zvako zuva rega rega asi tsvaga zvigadzirwa zvevanokwikwidza. Izvi zvinodaro nekuti vanokurumidza kukwikwidza vakatora nzvimbo dzakanakisa dzekutsvaga injini mhinduro. Iwe unogona kupfuura vako vanokwikwidza. Zvese zvaunoda kutanga matanho ekutsvaga injini neSemalt.
Ehe, kutsvaga injini yekubudirira inzira inoshanda kwazvo yekukwezva vatengi, asi pane mamiriro mamwe chete: chete nyanzvi dzinogona kuzadzisa izvo. Uye iyo pfungwa pano haisi muchokwadi chekuti inept optimization ingadhura zvirango kune yako webhusaiti. Dzimwe nguva huwandu hwevashanyi-saiti hwakakura, asi huwandu hwevatengi hunoramba huripo. Kuti uwane mhedzisiro yepamusoro mukusimudzirwa, iwe unofanirwa kuona runyorwa rwezvikumbiro zvinokurudzirwa uye chirongwa chekusimudzira. Nyanzvi dzeSemalt dzinogona kuita matanho akasarudzika mumamiriro ezvinhu akasiyana, saka usatombo edza kuzvironga pachako; pachinzvimbo, vimba iyo yakavimbika kambani.
Semalt SEO mhinduro
SEO optimization inosanganisira chirongwa chekushambadzira chedigital icho chinosanganisira mamwe maitiro anoitirwa kukurudzira webhusaiti kana rudzi. Maitiro akadaro anokutendera kuti uwedzere kuoneka paInternet. Semalt inogara ichipa yakakwana optimization mhinduro dzinovhara izere rizere rezviito zvinodiwa. Mhedzisiro inozoitika ichave kuwedzera kwe traffic uye kuonekwa kwewebhu webhusaiti. Izvo zvinonyanya kushanda ndeye FullSEO uye AutoSEO kukwikwidza, ayo anovimbisa kubudirira munguva pfupi. Pakutanga, iwe unofanirwa kufunga nezvese matanho akapiwa mumakwikwi aya yekusarudza imwe yakakodzera.
Semalt akagadzika huwandu hwenhanho yekushambadzira uku, iyo chinangwa chayo ndechokuisa yako webhusaiti panzvimbo yepamusoro munzvimbo yekutsvaga. Ikozvino, iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kwakakodzera kweiyo misimboti ye AutoSEO nheyo. Matanho ese eemushandirapamwe anoitika mukudyidzana kwakananga nevatengi nechikwata cheSemalt. Kuita kunonongedzerwa pasina mubvunzo kuchazotungamira kumigiro inodiwa kana iwe ukatevera zvese izvo kuraira kwenyanzvi zvedu kunoitirwa kukurudzira saiti yako. AutoSEO inosanganisira inotevera mabasa:
kusarudzwa kwemashoko akakodzera kwazvo;
Kutanga mushandirapamwe we AutoSEO, iwe unofanirwa kunyoresa pane yedu webhusaiti. Zvese zviitiko zvinotevera zvichaitwa newebsite webhusaiti. Izvo zvakanakira nekuti kutora chikamu kwako kungogamuchira ikozvino mishumo pane saiti. Analyzer ichaongorora zvakakwana chimiro chewebsite maererano nemitemo ye SEO. Mushure meizvozvo, iwe uchaunzwa mushumo wekutanga pamusoro pezita renzvimbo uye runyorwa rwezvikanganiso zvakaonekwa panguva yekuongorora. Kukanganisa uku kunoda kugadziriswa nekukasira kuenda kumberi. Yedu SEO mainjiniya ichaongororazve kuongororwa uye kusarudza mazwi akakodzera. Mhedzisiro yemaitiro acho yakawedzera webhusaiti traffic.
Nhanho inotevera yemushandirapamwe weAlsSEO kuchave kusarudzwa kwewebhu internet zvinongedzo uye nekuidziisa ivo mune akasiyana midziyo online. Zvemukati zvakanyatsotariswa kuti kuvepo kwesemantic kukosha. Kunze kwezvo, inofanirwa kuenderana nehukama hwakagadzirirwa kuisa. Maitiro ese ari kungogara achitariswa maneja wedu, saka zvese zvinotyisidzira kune webhusaiti hazvibatanidzwe. Maneja zvakare anoteedzera nzvimbo yezvinobatanidzwa muinjini yekutsvaga uye anotarisa kukura kwezvinhu zvinowanikwa pamberi pekuisa zvinongedzo.
Uchishandisa FTP kuwana (File Transfer Protocol) neruzivo kubva kumushumo wapfuura, Semalt nyanzvi dzinoita shanduko dzinodiwa pawebsite. Mushure meiyi shanduko, iyo optimization yesaiti inotanga kufambira mberi. Pakati pese pamushandirapamwe, Semalt anga achiongorora chigaro chekusingaperi chinogadzirisa, chinounisa mazwi anodiwa. Mazita ese akakosha anoongororwa kuti aenderane nezviri mukati. Sezvauri kuona, kutora chikamu kwako mukuita kudiki, asi iwe unogara uchifunga nezvese zvinoitika pane ino saiti. Nezve mutengo webasa, iyo yemwedzi AutoSEO package ichaita madhora makumi mapfumbamwe.
Iyo FullSEO ndeye kunaka SEO optimization, mhedzisiro dzayo inowanikwa munguva pfupi. Saizvozvowo, huwandu hwemaitiro ari kuitwa kugadzirisa saiti yewebhu mumainjini ekutsvaga. Pano, optimization yemukati uye yekunze inoitwa pasi pekutungamirirwa kwenyanzvi yeSEO. FullSEO inosimudzira SEO optimization iyo inopa isingaenzaniswi kubudirira mune online bhizinesi. Uyezve, iyi nhimbe ichabatsira kurasa vese vakwikwidzi vako kwenguva yakareba.
Kurudziro ye FullSEO inoenderera mumatanho. Kuti utange kuita izvi, unofanirwa kunyoresa pawebhusaiti yedu. Iyo yekuongorora kwewebhu webhusaiti inotanga, uye iwe unogashira rondedzero yakati. Kutumira pane chirevo, iyo SEO nyanzvi inotsanangura iyo semantic musimboti. Ongororo yacho inoratidzawo zvikanganiso zvese zvinodzivirira kufambira mberi. Kukanganisa kunofanirwa kururamisa nekukasira, zvino inguva yekufunga mazwi akakosha. Iwo mazwi akakosha anoita basa rakakosha mukuita traffic kuwedzera. Kuburikidza neFTP kuwana, iyo inyanzvi ichapa nyore shanduko dzose dzinodiwa. Iyi ndiyo nhanho yekuvandudza kwemukati webhusaiti.
Tevere, ichave yekunaka yekushanya. Ichi chikamu chinosanganisira kuisa zvinyorwa mune niche zviwanikwa. Zvishandiso izvi zvinofanirwa kuratidza zvakadzama kukosha kwechinhu chako. Iyo webhusaiti inozoshandurwa chaizvo munguva pfupi mushure mekuisa izvi zvinongedzo, saka SEO-nyanzvi dzinoteedzera chikamu ichi nokungwarira. Semalt inoshanda zvine hunyanzvi nemasaiti mazhinji akasimbiswa, ndosaka nyanzvi dzichiziva chaizvo kupi kuti zvipinde kupi zvinongedzo zvekubudirira. Iyo FullSEO maitiro anogara ari pasi pekutarisa kusvika apedza. Iwe unogara uchifambidzana neese shanduko pane ino saiti. Tora zvirevo zvakatsanangurwa pamusoro pewebsite yekukwira kwewebsite. Panguva ipi neipi yezuva, iwe unogona kubata munhu ane mutoro kubva kuSemalt uye wotsvaga tsananguro inodiwa.
Iko hakuna chikonzero chekunetseka kana SEO kusimudzirwa kumiswa nekuda kwechimwe chikonzero. Kunyangwe Google ichizobvisa zvese backlinks kubva mudura re data mumwedzi, masitendi anoramba ari mune imwe nzvimbo. Roundings inodonha haizo nyadzi, nekuti iyo FullSEO yakaita bhizinesi rayo. Nzvimbo yezvikamu ichagara yakakwira kupfuura usati wamhanyisa mushandirapamwe. Zvakaoma kuziva mutengo webasa iri pamberi: chirongwa chimwe nechimwe chiitiko chemunhu. Iko mutengo unowanzogadzwa mushure mekunge nyanzvi yeSEO inoongorora yako webhusaiti uye kuita zvimwe mhedziso. Zvisinei, mutengo wese uchave wakanyatsogadziriswa nemari inenge yauya necampaign.
Ongorora dhata yekuunganidza ndeimwe yezvikamu zvekugadzira webhusaiti SEO optimization. Semalt akapfuura masystem ese anokwikwidza mune izvo. Muenzaniso ndeye rakatsanangurwa webhusaiti webhusaiti sevhisi - Analytics. Iyo yekutevera inoteverwa nekugadzirwa kwegwaro rakazara, kusanganisira kuongororwa kwenzvimbo dzemakwikwi. Iwo akakosha akakodzera mazwi ari kusarudzwa, uye cheni yemhando yakagadzirwa, zvichienderana nechiyero chavo. Pahwaro hwemashoko akakosha, iyo semantic yakakosha inogadziriswa, iyo ichashandiswa kusimudzira webhusaiti yako mune ramangwana. Heino runyorwa rwezvinangwa zveAdvanced:
Analytics inotora kushanda nekukurumidza iwe paunenge uchisaina pane yedu webhusaiti. Kuunganidza data kunoitwa otomatiki. Kana wapedza kuunganidzira kuunganidzwa, iwe uchaunzwa mushumo panomira webhusaiti yako mune yekutsvaga injini. Kunze kwezvo, nzvimbo dzevanokwikwidza dzinoongororwa, zvakare, saka iwe uchave neruzivo rwazvokwadi nezve mamiriro azvino ese ese echitatu-bato webhusaiti. Mukana wakakosha. Padanho rekuumbwa kwewebsite, zvese zviyero zveSEO zvinove zvichatorwa mufungwa, nekudaro, iyo webhusaiti inogadziriswa ichagadziridzwa kuti iwedzere optimization.
Kuve neakavimbika account kunoita kuti iwe uwedzere chero huwandu hwesaiti kune yako pachako kabati. Imwe neimwe webhusaiti yakawedzerwa ichaongororwazve. Chirevo chinoratidza zvese zvabuda muongororo; zvichava pachena kuti ndeapi mazwi akakosha aunofanira kushandisa. Iyo sisitimu ichaita chokwadi chekuti mazwi akakosha anoenderana nezvinorehwa nezviri mukati. Iko kusanganiswa kweaya matanho pasina mubvunzo kunotungamira kune kukurumidza kuwedzera kwevanopinda webhusaiti. Nenzira, iwe unogona kuwedzera kana kudzima mamwe mazwi makuru pane zvaunoda iwe.
Iko mukana wekusarudza Analytics ndeyekuti webhusaiti inoongororwa maawa makumi maviri nemaviri pazuva. Kufambira mberi kwayo kunoteverwa nehungwaru kunyangwe iwe uchizorora uye usingaite bhizinesi. Ruzivo nezve vakwikwidzi vako vanokutendera kuti utore chiito nenzira kwayo nenguva, uchigara pazvinzvimbo zvepamusoro. Haufanire kumbofunga nezvekuti zviitei zviri nani, Analytics ichakuzivisa izvo chaizvo zvaunofanira kuita. Vanhu vazhinji vanoshandisa Chikumbiro Programming Interface (API), chiri nyore kwazvo nekuti iyo data inongomiraniswa, ichitendera iwe kuti ugare uchiziva zvese nekugadziridzwa. Analytics inopa matatu mutero mapakeji; chimwe nechimwe chazvo chine mutengo wake. Vari:
Semalt inotaurawo Webhu Development services. Ichi chirongwa chakagadzirirwa kugadzira nzvimbo yekutengesa, kusanganisira kugadzira zvikamu zvayo. Izvo zvakananga - dhizaini, kubatanidzwa neyechitatu-bato mashandisirwo, uye Zvekushandisa Management System. Izvo zvinowedzerwa zvinotsanangurwa e-commerce modules uye APIs.
Iko kuvhurwa kwemakambani makuru einternet ekushambadzira nguva dzose kunosanganisira zvimwe zvirongwa zvekushambadzira. Semalt akafungidzira mamiriro ezvinhu akadaro, achikurudzira kuumbwa kwevhidhiyo yakakosha. Vhidhiyo yacho ine chimiro chekusimudzira, inoratidza zvese zvakanaka zvekambani nyowani. Iyo "Yekukurudzira Vhidhiyo Kugadzira" chirongwa chinogona kuitwa nenzira mbiri: template uye nekuzvisarudzira. Mune imwe neimwe shanduro, mutengo wakasiyana. Maererano neruzivo rwenyanzvi, makumi mashanu muzana ebudiriro mubhizinesi repamhepo inoenderana nekumiririrwa kwakakodzera kwekambani. Vhidhiyo yedu inosimudzira chikamu chebudiriro zvakanyanya kumusoro.
Saka takaita muchidimbu nezvekambani yeSemalt, asi tenda, ingori chando chechando ichienzaniswa nezvose zvakanaka zvinogona kuunzwa nekambani. Iyo SEO webhusaiti optimization inopfuura nekungosarudzika kwemazwi. Iyo sainzi yakazara inowanikwa chete kune nyanzvi. Verenga nyaya zvedu; uchaona kuti avo vaiyedza kuita vasina Semalt vaitikumbira rubatsiro. Uye taimbovachengeta. Usatambisa nguva yako; pachinzvimbo, tanga kukura naSemalt, pfuma, uye fara. Isu takakumirirai!